प्रदीप खड्काको स्टारडम ‘रोज’ले कहाँ पुर्याउला ? « Ramailo छ
प्रदीप खड्काको स्टारडम ‘रोज’ले कहाँ पुर्याउला ?
फिल्म ‘प्रेम गीत’ पछि उदाएका नायक हुन्, प्रदीप खड्का । यस पछि उनी अभिनित दुई फिल्म ‘प्रेम गीत २’ र ‘लिलिबिली’ प्रदर्शनमा आए । यी फिल्महरुले पनि दर्शकलाई निराश पारेनन् । तीन फिल्म लगालग सफल भएपछि प्रदीप खड्काको स्टारडमको पर्खाल बलियो बन्दै गएको छ ।
यिनै युवा स्टार अभिनित चौथो फिल्म ‘रोज’ भदौ २२ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको छ । यो फिल्मले प्रदीपको स्टारडमको गतिलो परिक्षा लिने फिल्मी विश्लेषकको विश्लेषण छ । कसरी त ? ‘प्रदीप खड्काको स्टारडमका कारण रोजको विषयवस्तु समेत गौण हुन गएको छ’, एक फिल्मी विश्लेषकको भनाई छ, ‘रोजको सम्पूर्ण अभिभारा प्रदीपको काँधमा राखेर हेरिएको छ ।’ फिल्म घोषणा ताका फिल्मको विषयवस्तु शहरको सत्य घटनामा आधारित भनिएको थियो ।
हुन पनि हो निरक पौडेल निर्देशित ‘रोज’ निर्माणको घोषणादेखि नै चकलेटी हिरोको बदलिएको लुक्स र यसको कथाको चर्चा बढी भयो । फिल्मको प्रचार प्रसार पनि प्रदीप केन्द्रित भए । देशका हरेक शहरमा प्रेम गीत हिरोको क्रेज लोभलाग्दो देखियो ।
यसैले ‘रोज’ को व्यापार र प्राप्त हुने प्रतिक्रिया लाई प्रदीपको स्टारडमसँग जोडिएर हेरिएको छ । फिल्मले गर्ने सुरुवाती व्यापार अनि प्रदीपको अभिनय कौशलले उनको स्टारडमा खास अर्थ राख्ने धेरैको बुझाइ छ । ‘रोज’ फिल्मले प्रदीप खड्काको स्टारडमको पर्खालको उचाइ बढाउन मद्धत गर्ला ?